Home News DEG DEG; Qarax xoogan oo gil gilay Magaalada Muqdisho
DEG DEG; Qarax xoogan oo gil gilay Magaalada Muqdisho
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax Gaari uu goordhow ka dhacay magaalada.
Qaraxa ayaa ka dhacay Xaafadda Taleex ee degmada Hodon, sida dad goobjoogayaal ah ay sheegeen, waxaana la ogeyn khasaaraha ka dhashay.
Dadka aan la hadalnay ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa Gaari waxyaabaha qarxa ay ku xirnaayeen, lama hayo faahfaahin intaasi dhaafsiisan.
Dhawaqa qaraxa oo laga maqlay Taleex ayaa ka dhacay agagaarka Masjidka Ramadaan ee degmada Hodon.
Previous articleWasiirka Amniga oo ka dhawaajiyay in xariy xabsiga godka Jilicoow
Next articleWasiirkii Howlaha Guud oo iscasilay sheegayna in aanu kasii mid ahaan karin dulmiga RW Kheyre
Wadooyinka Xiran ee Muqdisho Iyo Saameynta Ay Ku Yeelatay Bulshada Qeybaheeda...
Wasaaradda Arrimaha dibadda Itoobiya oo Map-ka Afrika ka tirtay Soomaaliya